Xerada Tababarka Iibka
Khamiis, Juun 24, 2010 Khamiista, Oktoobar 4, 2012 Matt Nettleton
Maxaa loo sameeyaa Colts tag Xerada tababarka? Miyaanay hore u aqoon sida loo ciyaaro Kubadda Cagta?
30-ka Luulyo ee sanadkan Colts wuxuu aadi doonaa Xerada Tababarka, tani waxay calaamad u noqon doontaa billowga muddo afar toddobaad ah oo ah tababar xoog leh oo loogu talagalay in lagu qasbo ciyaartoydu inay diiradda saaraan waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan si loo wanaajiyo awooddooda kubbadda cagta. Laakiin waxay ila tahay waqti lumis aniga, ka dib markii inta badan ciyaartoydan ay soo mareen ugu yaraan 8-dii sano ee ugu dambeysay noloshooda iyagoo ka shaqeynaya xirfadooda ciyaaraha aadka loo tartamo Colts-na wuxuu ka guuleystay in ka badan koox kasta oo xirfadleyaal ah waqtigan. Maxaa dhulka dadkan u maleyn karaa inay baran doonaan?
Layaab ma ahan, maalinta ugu horeysa ee xerada waxay u badan tahay inay maqli doonaan xigashada caanka ah ee Vince Lombardi oo inta badan tababarayaashu isticmaalaan si ay u bilaabaan xerada tababarka. Mudanayaal, kani waa kubada cagta. ” Bilaabashadani waxay u muujineysaa dhammaan ciyaartoyda garoonka ku jirta in guusha kubada cagta, sida guusha iibka, ay ku saabsan tahay diirad dhameystiran oo hal maskax leh oo ku saabsan sameynta waxyaabaha yar yar oo saxda ah iyo inaad hubiso inaad adigu fulinayso Aasaaska.
Maaddaama aan la shaqeyno macaamiisheenna ma jiraan wax ka qanacsan oo aan ka ahayn daawashada indhahooda oo iftiimaya iyagoo garowsanaya in tababarka iibku uusan ka duwaneyn tababarka isboortiga. Waxay garwaaqsadeen in nidaamka ay bilaabeen inay bartaan uusan ka ahayn taxane fudud oo Dabeecado, Dabeecado iyo Farsamooyin ah - in markii si sax ah loo fuliyo ay si weyn u kordhiyaan fursadaha ay ku xidhayaan ganacsi badan iyo inay lacag badan helaan.
Oo iyaguna way garwaaqsadaan sababta tababarku waa hawl socota, iyadoo macmiilkeena caadiga ahi nala shaqeynayo 4-6 sano. Sababtoo ah si kasta oo ay u fududahay Dabeecadaha, Dabeecadaha iyo Farsamooyinka waxaa jira waddo dheer oo ka timaadda garan la'aanta waxa ay tahay inaad sameyso iyo inaad sameyso wixii aad toos u qaban laheyd.
Ma aaminsani in tababarku kaamil ka dhigayo, xaqiiqda kubada cagta iyo iibka ma jiro wax kaamil ah. Si kastaba ha noqotee, goob kasta oo xirfadle ah waxaan ognahay in tababarku horumar sameeyo. Markaad eegto xooggaaga iibka, miyey ku dhaqmayaan? Ficil ahaan waxaan ula jeedaa, runti ma waxay ka shaqeynayaan inay si nidaamsan u hagaajiyaan awooddooda inay wax ku iibiyaan iyagoo adeegsanaya xoojinta socota oo ay weheliso ku celcelinta iyo cabirka natiijooyinka? Mise way maqan yihiin iyagoo arkaya dad badan oo karaankooda ah, iyagoo rajeynaya in waxa ay sameynayaan ay sax yihiin?
Marka xigta ee aad daawato Peyton Manning oo si sahlan oo afar taardood taabasho ah u tuuraya u hubso inaad hakad gasho oo aad ogaato in daqiiqad kasta oo Peyton uu ku ciyaarayo garoon inta lagu guda jiro ciyaaraha uu ku qaato in ka badan 15 daqiiqo goob tababar ah. Taas ayaa igu celinaysa su'aashayda, markaad eegto awoodaada iibka, miyay ku dhaqmayaan?
Matt Nettleton waa saameyn sare, hogaamiyaha kooxda iibka firfircoon iyo tababaraha leh hammi natiijooyinka iyo rikoor la xaqiijiyay. Waxaan haystaa in kabadan 25 sano oo waayo aragnimo ah oo bilaabaya isbadal si loo gaaro hadafyada iyo in la wanaajiyo ilaha dhaqaalaha kor u qaadista, maareynta kharashka iyo koritaanka faa iidada.
ATTN: Horumarinta Codsiyada Warbaahinta Bulshada